UNkulunkulu Archives - Mytika Speak
Ikhaya / uNkulunkulu
Umaka - uNkulunkulu
Abantu banezikhathi ezinzima ngokuphathelene noNkulunkulu. Banomuzwa wokuthi uNkulunkulu akuvamile ukubonakala esesimweni somzimba futhi lokhu kubenza bazizwe besaba futhi behlukene ...
UNkulunkulu uyinhlanganisela yakho konke nakho konke. Lapho abantu behlangana, bakhombisa uthando nokwamukelana komunye nomunye ngakho-ke kuNkulunkulu. Lokhu ...
Wonke umuntu unelungelo lokuzwa imizwa yakhe kepha kufanele uhlale wazi impande yolaka lwakho futhi uyiqondise ngokufanele. Kwesinye isikhathi, uzithukuthelele ...
UNkulunkulu ungumthombo ongenamkhawulo futhi ungumdali wakho konke okwenyama, okungokomoya, nangaphezulu kwalokho ongakucabanga. UNkulunkulu uyinhlanganisela elinganiselayo yakho konke ...
UNkulunkulu uzwakala noma nini. Lapho kukhulunywa ngobumsulwa bukaNkulunkulu, kungachazwa njengokuzwa kobunye nakho konke ngaphakathi nangaphandle kwakho. Lokhu ...
Izimangaliso zenzeka njalo kepha zithathwa kalula futhi zithathwa njengokuqondana kwezinto. Ayikho into efana nokuqondana nje futhi yonke impilo iyisimangaliso. Ngezikhathi ...
Isayensi ingabonakala njengethayi ebopha kokubili ngokwenyama nangokomoya. Lapho abantu bezama ukuqonda umhlaba ophathekayo, isayensi inikeza lowo mqondo ...